Baidoa Media Center » Sarkaal lagu dilay dagaal shalay ka dhacay duleedka Baydhabo oo maanta lagu aasay Baydhabo.
Sarkaal lagu dilay dagaal shalay ka dhacay duleedka Baydhabo oo maanta lagu aasay Baydhabo.
July 30, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Dagaal kharaar oo dhex maray ciidamada Xarakada Alshabaab iyo kuwa Itoobiya oo ay kaabayaan ciidamada dowlada KMG Soomaaliya kana dhacay shalay gelinkii dambe deegaanka Goof gaduud ee duleedka magaalada Baydhabo ayaa lagusoo waramayaa inuu ku geeriyooday sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada dowlada KMG Soomaaliya ee gobolka Bay.
Korneel Aadan Keerow oo loo yaqaanay Aadan Amxaar ayaa shalay ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay deegaanka Goof gaduud ayada oo saakayna lagu aasay magaalada Baydhabo.
Sarkaalkaan ayaa la sheegayaa inuu kamid ahaa saraakiisha ugu cad cad ciidamada dowlada KMG Soomaaliya ee gobolka Bay isaga oo kaalin mug lehna ku lahaa dagaalada lagagasoo hor jeedo Xarakada Alshabaab.
Dhanka kale waxaa jiro warar sheegayo in saraakiil Itoobiyaan ah wax ku noqdeen dagaalkii shalay balse lama xaqiijin karo arinkaas.
Xarakada Alshabaab ayaa horay u ballan qaaday inay dagaal jabhadeed la galeyso ciidamada Itoobiya oo ah awooda ugu sareyso gobolada koonfurgalbeed Soomaaliya.